Abaal marinta albaabka weyn ayaa noqon doonta taxane TV-ga Apple + | Waxaan ka socdaa mac
Abaalmarinta Albaabka Weyn si ay u noqoto taxane ka socda Apple TV +
Apple wuxuu rabaa taxanaha Abaalmarinta Albaabka Weyn tan ku dhex jirta taleefankaaga Apple TV + boorka, sidaas awgeedna ay u sii kordheyso tirada xulashooyinka isticmaalayaasha maxaa yeelay tayada waa hagaagsan tahay laakiin arrimaha tirada. Tixdani waxay ku saleysan tahay sheekada Walsh ee isla magaca ah. Riwaayad lagu macneeyay inay ku qoran tahay « Nicmada luqadeed iyo dareen layaab leh indho indheyn xeel dheer oo ku saabsan waxa macnaheedu noqon karo inaad run ahaato naftaada adoo maamuusaya isku xirnaanta guurka, saaxiibtinimada, iyo bulshada.
Maxaad sameyn laheyd hadaad ogaan laheyd awooda noloshaada? Taasi waa su'aasha Deerfield, dadka degan Louisiana ay la kulmaan marka mashiinka DNAMIX uu ka soo muuqdo dukaankooda raashinka ah ee deegaanka. Dhab ahaantii, maahan wax la jeclaado, waxay umuuqataa qol yar oo sawir qaade ah. Laakiin ballanqaadkeedu waa wax lala yaabo: Iyada oo si dhakhso ah dhabankaaga loo duudsiinayo iyo laba doolar, qalabku wuxuu sheeganayaa inuu adeegsanayo sayniska DNA si uu kuugu sheego awoodda noloshaada. Kalsooni ku filan oo lagu muujiyo xiisaha dadka magaalada, ugu dhakhsaha badan macallimiintii hore, kalkaaliyeyaasha, iyo ganacsatada Deerfield waxay si kadis ah u badali doontaa koorsada si loo sii wado meelaha ay u socdaan sida saaxiriin, cowboys, iyo ciyaartooy, oo ay ku jiraan jilayaasha waaweyn ee sheeko, Douglas Hubbard iyo xaaskiisa, Cherilyn.
Abaalmarinta Albaabka Weyn ayaa noqon doonta Taxanaha labaad ee asalka ah ee Apple ayaa laga wakiishay Telefishanka Skydance, kadib taxane riwaayad aasaasi ah oo ay jilayeen Jared Harris iyo Lee Pace. Kaas oo ku saleysan sheekada halyeeyga sayniska ee Isaac Asimov trilogy. Waxaa loo qorsheeyay inuu si caalami ah uga soo muuqdo Apple TV + deyrta soo socota.
Taxanaha cwuxuu ku bilaaban doonaa 10 qaybood waxayna ka timaaddaa Emmy Award-win writer iyo soo saare fulineed David West Read. Sidoo kale Telefishanka Skydance iyo CJ ENM / Dragon Studio.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Abaalmarinta Albaabka Weyn si ay u noqoto taxane ka socda Apple TV +
Taxanaha dagaalka Rap Ver Verz wuxuu kujiray isha Apple TV
AirPods iyo AirPods Pro waxay ku jiraan marxalad isbedel ah